Quruxda & Daryeelka Shakhsiyadeed Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Wax Walba Oo Aad Ku Ogaan Karto Joogteynta Nadaafadda Afka
“Daryeelka caafimaad ee afka oo liita wuxuu sababi karaa caafimaad daro guud.”, George Taylor Nadaafadda afka waxay qofka ka ilaalisaa inuu nadiif noqdo afkiisana ka ilaaliyo jeermiska iyadoo la cadayayo ilkaha lana dhaqo ilkaha dhexdooda. Caafimaadka afka waa in la sameeyaa maalin kasta si ay awood ugu yeeshaan ka hortagga cudurrada ilkaha iyo urta xun. Joogtaynta nadaafadda afka waxay hagaajin kartaa […]Read More
Daryeelka Ilmaha Tallaabooyinka aasaasiga ah iyo Noocyada
"Daryeelka ilmaha waa howlo ama qorshe la raacayo taxaddarro loo soo jeedinayo waalidiinta ama bixiyeyaasha daryeelka xirfadleyda." Waa, marka lagu daro, hami dhisid ah oo isbitaalo kala duwan oo ay weheliso xarumo dhalmo halka ay tahay masraxa wadada loogu keenayo ilmahooda guriga. Inta badan waalidiinta argagaxa leh markii ugu horeysay waxay dareemaan jahwareer markay daryeelayaan dhallaanka cusub. Halkan […]Read More
Sida loo Doorto Bixiyeyaasha Ku habboon Daawooyinka Daryeelka Ilmaha
Waalidiintu waa inay feejignaadaan markay dooranayaan kuwa keena alaabada daryeelka ilmaha. Waa kuwan talooyin kooban oo kaa caawin doona inaad hesho alaab-qeybiyeyaasha saxda ah. Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal fara badan oo kala duwan oo ah alaabada daryeelka carruurta oo ay adkaan karto in la ogaado kuwa alaab-qeybiyeyaasha ah ee bixiya alaabada ugu fiican. Waxaad rabtaa inaad hubiso inaad tahay […]Read More
Talooyin Ku Saabsan Soo Xulidda alaab-qeybiyeyaasha Wanaagsan ee Alaabada Saabuunta
Helitaanka alaab-qeybiyeyaasha alaabada qubeyska ayaa walaac weyn ku leh qoysaska adduunka casriga ah. Baahida loo qabo alaabadan lagu maydho ayaa sii kordheysa iyadoo dad badani ay xiiseynayaan inay yeeshaan qubeys nasasho leh. Hal dariiqo oo lagu helo alaab-qeybiyeyaasha saxda ah ee alaabada qubeyska waa adigoo taga dukaamada deegaanka. Nidaamku wuxuu caddeyn doonaa […]Read More
Sida Loo Helo Bixiyeyaasha Qalabka Qurxinta Guriga
Waa xaqiiqo in alaab-qeybiyeyaasha qalabka qurxinta ee guriga ay ka duwanaan karaan midba midka kale. Waxay keenaan badeecooyin kala duwan waxayna ku kala duwan yihiin qiimaha. Alaab-qeybiyeyaasha qalabka quruxda waxaa laga helaa internetka. Si kastaba ha noqotee, badanaa kama diiwaan gashan yihiin ama shati kama haysan waddan kasta. Tani waxay adkeyneysaa in […]Read More
Bixiyeyaasha Jumladlaha ee Alaabada Caafimaadka Dheddiga
Su'aalaha ugu badan ee dadku qabaan markay tahay iibsiga alaabada nadaafadda dumarka yaa bixiya qiimaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah? Dad badan ayaa jeclaan lahaa inay arkaan halka ugu hooseeya ee alaabooyinkan. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa su'aashaan wuxuuna soo bandhigayaa xoogaa aragti ah. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu heli karo alaab-qeybiyaha […]Read More
Waa maxay Soo-saare Wanaagsan ee Daawashada Urta?
Raadinta alaab-qeybiyeyaasha carfinta udgoonku waa tallaabo aad muhiim ugu ah ganacsi kasta. Waxaad ubaahantahay inaad doorato alaab-qeybiyaha ku siinaya alaabada ugufiican qiimaha tartanka. Shirkadaha bixiya caraf udgoon Waxaa jira shirkado badan oo bixiya caraf udgoon. Waxay sidoo kale bixiyaan noocyo kala duwan oo carfayaal ah. Ogaanshaha nooca carfayeyaasha […]Read More
Raadi Bixiyeyaasha Timaha ee Ugu Fiican
Waxaa jira fursado badan marka la eego alaab-qeybiyeyaasha alaabada daryeelka timaha ee New Zealand. Si loo daboolo baahiyaha alaabada daryeelka timaha waxaa jira alaabooyin timo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo la heli karo. Joogtee muuqaalka quruxda badan ee timaha Isticmaalka alaabada daryeelka timaha waxay caado u noqotay dad badan […]Read More